SomaliNet Magazine: AQOON KORORSI - BARASHADA HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)
Magaceygu waa Cabdi Qafaar Maxamed Xassan, waxaan ahay ardey ka dhigta IT khaas ahaan webdesign and Programming simisterkii ugu danbeeyey College-ka Friesland College ee ku yaalla magaalada Heerenveen en dalka Holland. waxaana jeclaystey inaan dhalinta soomaaliyeed ee xiiseeya Computer technolige-ga uga faa\_'dieeyo. Haddaba waxaan bahda somalinet.com iyo anigu ku heshiiney inaan qoro bernaamijyo haddii ay noqon lahayd artikalo ama casharro IT ah si ay dhallinta soomaaliyeed uga faa \_'ideystaan.
Haddaba waxaan jecelahay inaan bernaamijkeyga ku bilaabo koorso dagdag ah oo HTML (Hyper Text Markup Language ) ah.?
HTML waxey u taagan tahay (Hyper Text Markup Language). Luuqaddan, ogow HTML ma ahan Programme ee waa luuqad ama baratakool, waana mid suurtagalisa sameysta iyo isku xiridda electronic ah Hypertext links oo u dhaxeeya dukumiintiyaal ama feylal ( maqaal, muuqaal ama qoraalo) kala duwan ee yaalla meelo internetka sida: marka aad gasho site-ka WWW.SOMALINET.COM haddii aad riixdo qeybta Chatka (wada sheekeysiga) waxaad iman bog ka duwan bogii hore ee aad joogtey oo ah WWW.SOMALINET.COM/CHAT)
Sida aan horeyba ku soo sheegney HTML waxey u taagan tahay Hyper Text Markup Language Magacaas oo muujinaya in HTML tahay Luuqad ama bartakool *Protocol* luuqad leh 2 muhiimadood:
Hypertext iyo Hyperlinks:
Micnaha ama muhiimadda Hyper text waa isku xiritaanka feylal ama informeyshino lagu xiro kuwa kale isku xiritaankaasna waa mid isticmaala protocoolka Hyperlinks. Hyperlinks la?aantiis waxaan dhihi karnaa ma uusan jiri lahayn World Wide Web (WWW) internetku.
Ka soo qaad waxaad soo gashey Bogga www.somalinet.com waxaad dooneysaa inaad aqbaarta soomaliya ka aqrisato. Bogga hore ee somalinet.com waxaa ku qoran wararka oo kooban, laakiin haddii aad dooneyso inaad aqriso warka oo dhan waxaa loo baahan yahay inaad riixdo ciwaanka aqbaartaas ama meesha ay ku qoran tahay clik ama riix halka, markaas kadib ayaad iman bog kale oo ka duwan boggii aad ka soo gashey oo ay ku qoran tahay warkii aad dooneysey oo faahfaahsan. Riixitaanka aad adigu riixeyso waxa aad ismimaaleysaa Hypetext (oo meesha aad riixdey waa Hypertext) iyo Hyperlink (waxaad lagu geynayaa meesha aad codsatey, riixitaanka aad riixdey HTML waxey u tahay amar ama codsi).
Haddaba ogoow in uusan jiri karin Web page (bog internet) ah ama website-yo haddii uusan jiri lahayn Hyper text iyo Hyperlink, haddii ay jiraanna ay yihiin kuwa go?doonsan oo ku xirneyn bogog kale ama www(internetka).
Micnaha ama muhiimadda Markup waa qurxinta la qurxinayo qaab dhismeedka iyo qaab qoraalka web-page-kaaga iyadoo la isticmaalayo koodadka HTML. Erayga Markup waa eray ingiriis ah micnihiisina yahay qurxinta, fiicney, sii horumarin. Koodadka HTML waxay suurta in Browseradu ( programme-yaal loogu tala galey in lagu lagu furo ama aqristo bogaga internetka sida Microsoft Internet Explorer ama Netscape) aqriyaan website-yada ama bogagga.
Casharkeenna 2-aad waxaan ku bilaabi doonnaa barashada koodadka HTML, waxaana Bilaabi doonnaa dhisid Webpage anaga oo isticmaaleyna HTML
Haddii ay jiraan wax aad fahmi weysey, ama su?aalo ku saabsan HTML, ama talo ah, fikrad ama eedeyn (critic) fadlan iigu soo dir halkan email Abdigaffar@yahoo.com adiga oo mahadsan
Abdigaffar M. Xassan